Indlu yaseJamani, inoveli yokuqala yombhali wesikrini uAnnette Hess. | Uncwadi lwangoku
Indlu yaseJamani Incwadana yenqaku lokuqala ngumbhali wefilimu kunye nomabonakude, uAnnette Hess. Ukusekwa kuvavanyo lwaseNuremberg, ibali libhekisa kwizoyikiso zokuBulawa kwabantu ngenkohlakalo ngokuzigxeka. Kwangokunjalo, ihlalutya ukuvela kwengqondo yaseJamani ukusuka nge60s ukuza kuthi ga namhlanje, ukusuka kwimbonakalo yeendlela ezininzi zeziganeko ezixeliweyo.
Ngokuphathelene noku, umbhali weHanoverian uthe: “Oku bekusoloko kungumbandela iintsapho ezingathandi ukujongana nawo. Umvandedwa weziganeko ezenzeka emfazweni awukawoyiswa ”. Kwaye uyongeza, "Ndiyabazi abantu abangakhange babandakanyeke nakuluphi na uhlobo lolwaphulo-mthetho, kodwa abaziva benetyala ngento eyenziwa ngabantu bakowabo ngexesha lobuNazi."
1.1 Ukusuka kwi-cinema ukuya kuncwadi
2 Isishwankathelo seNdlu yaseJamani
2.1 Umzuzu wembali
2.2 Umlinganiswa ophambili
3.1 Injongo ecacileyo yombhali
3.2 Uluntu lwaseJamani kunye neeakhawunti ngokudlulileyo
3.3 Ngaba iNdlu yaseJamani yincwadi yamabali yamabhinqa?
UAnnete Hess wazalwa ngoJanuwari 18, 1967 eHannover, eJamani. Izifundo zakhe zokuqala zazikwipeyinti kunye noyilo lwangaphakathi. Ke phakathi ko-1994 - 1998 wafunda ukubhala e-Berlin University of the Arts. Umbhalo wethisisi yakhe (eyabhalwa kunye no-Alexander Pfeuffer), Yintoni Esebenzisa Uthando Engqondweni, wayisebenzisa njengetemplate yefilimu engaziwayo eneenkwenkwezi uDaniel Brühl.
Phambi kokuba abhalele umboniso bhanyabhanya kunye nomabonakude (ukuqala ngo-1998), uHess wasebenza njengentatheli kunye nomlawuli oncedisayo. Nguye umdali uthotho lweTV oludumileyo Weissensee y Ku'damm 56/59. Eyamenza ukuba alungele i Ibhaso likaAdolf Grimme kunye neMbasa yeGolide yeGolide (enikezelwa yiphephancwadi elidumileyo laseJamani HÖRZU).
Ukusuka kwi-cinema ukuya kuncwadi
Indlu yaseJamani Imele umngcipheko-kodwa ocwangciswe kakuhle-ukusuka kubugcisa besixhenxe ukuya kwiileta zika-Annette Hess. Ukhawuleze wazimisa njengomnye wabaphumeleleyo boncwadi abathetha isiJamani kule minyaka idlulileyo. Kwixesha elifutshane, inoveli kulindeleke ukuba iguqulelwe kumazwe angaphezu kwamashumi amabini kwaye iziswe kwiscreen esikhulu.
Isishwankathelo se Indlu yaseJamani
Ungayithenga le ncwadi apha: Indlu yaseJamani
Ibali lenzeka ngokulandelelana ngo-1963, ngamaxesha okuvuselela ngokupheleleyo kwezoqoqosho eNtshona Jamani. Ngolusuku olwandulela olwalubizwa ngokuba lityala laseFrankfurt, apho amangqina angama-318 -kuquka nabasindi base-Auschwitz abali-181- banikela ubungqina babo. Inkqubo eyaluqhekezayo udonga lokuthula luhlala luhleli kuluntu lwaseJamani.
Kwakumalunga ne- isimo semeko Kunzima ukutshintsha, kuba kwilizwe laseJamani ukwakhiwa kwekamva elithembisayo kwabekwa phambili. Kodwa inkumbulo yembali ayixoleli, amazwi exesha elidlulileyo kuye kwafuneka ukuba aviwe kwaye angakhathaleli ukuxhathisa kwabo bazimisele ukubaphepha. Kuba ekugqibeleni, uninzi lweentsapho zaseJamani zazinxulumene ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo nobuNazi.
Kule meko kuvela u-Eva Bruhn, umguquleli oselula osapho lakhe luphetheyo lokulawula indawo yokutyela yemveli ebizwa ngokuba yiLa Casa Alemana. Yena, njengabantu abaninzi abancinci belo xesha, wayengazazi iinkcukacha ezoyikisayo (kwaye zenziwa) zizizukulwana zangaphambili zelizwe lakhe.
Eyona nto yayixhalabisa kakhulu yayingumsebenzi wakhe kwigosa lokuguqulela, kwivenkile yokutyela, kunye nesoka awayethandabuza ukulicela kuyise. Yonke into iyatshintsha xa u-Eva ethatha isigqibo-ngokuchasene neminqweno yosapho-ukusebenzisana nomsebenzi wokuguqulela ukutshutshiswa kwezilingo zaseFrankfurt. Inkqubo ephawulwe kwimbali njengelokuqala kwetyala laseAuschwitz.
Njengoko iingxelo zamangqina ziqhubela phambili, imibuzo malunga nosapho lakwaBruhn iye ingapheli. Ngaphandle kothando olukhulu luka-Eva kwabo basondeleyo kuye, ukukrokra kuye kungene kuye xa wonke umntu enyanzelisa ukuba ayeke ukujonga ixesha elidlulileyo. Kutheni, ukuba ziziganeko zakutshanje, kungekho namnye owakhe wagqabaza ngazo?
Iinkcukacha zithathwa njenge "qhelekileyo "kude kube lelo xesha, ziqala ukuthatha ukufaneleka, kutheni iifoto zealbham yosapho zingaphelelanga? Ngomzuzu obalulekileyo weli yelethwe ulwazi olunqabileyo kuye: Indlu yaseJamani ligama elinelifa elimnyama. Ngaba u-Eva uya kuba nakho ukuhlala naye kunye nabanye ngendlela efanayo emva kokubona inyaniso?
Injongo ecacileyo yombhali
U-Annette Hess ubhengeze ngo-2019, "luxanduva lwethu ukubalisa ngokuQhushululu kwabantu ngeXesha eliQhelekileyo. umnqweno wombhali yayingekokubhala incwadi yenoveli ebhaliweyo, waqala kwiziganeko eziyinyani ukuze abumbe ibali lakhe. Ngapha koko, ubungqina malunga nobubi obenzekileyo kwinkampu yoxinaniso yase-Auschwitz obonakaliswe kwinoveli buyinyani.
Ngelixa uHess engakhange asebenzise amagama okwenyani, abanye- njengomtshutshisi owaziwayo uFritz Bauer- bayabonakala ngokulula. Ukongeza, uHess wenza ukufana phakathi komlinganiswa ophambili, uEva, kunye nomama wakhe, "umntu owayengazi kwanto ngokwenzekileyo." Nditsho notatomkhulu wombhali weHanoverian wayelilungu lamapolisa ePoland ngexesha lamaJamani.
Uluntu lwaseJamani kunye neeakhawunti ngokudlulileyo
Ngokuka-Annette Hess, Uluntu lwaseJamani "alunakuze luvale umba onje." Emva kweminyaka engama-75 yokuphela kweMfazwe yesibini (II) yeHlabathi, umbhali ucinga ukuba “isizukulwana ngasinye esitsha kuya kufuneka sizibeke kuso. Ngoku, ngaphezulu kwama-40% ezinto ezingamaJamani azazi ukuba kwenzeka ntoni kanye kwi Ukubulawa kwabantu ngenkohlakalo".
Hess mhlawumbi ulungile. Ukunyuka kwelungelo eligqithisileyo kumazwe afana neJamani, iPoland neOstriya kunokubonisa uphawu lokungakhathali. Nangona kunjalo, akaboni buhlobo phakathi kokulibala nala maqela agqithisileyo, "ubuncinci ubudlelwane obungqonge ngqo."
Yi Indlu yaseJamani inoveli eyintsomi yabafazi?
UAnnette Hess ucaphula.
Lo ngumbuzo ongonwabisiyo ku-Annette Hess.Ulungelelwaniso lwabafazi Yilebula ebesoloko efuna ukuyiphepha. Ewe kunjalo, kulula kakhulu kubagxeki ukuba bambhale ngale ndlela ngenxa yebango lobufazi eliqulathwe nguEva. Umlinganiswa ophambili wenoveli unesifo sengqondo esibonakalayo seqabane lakhe xa iimfihlo ziqala ukuvela.
Nangona kunjalo, amabango omfazi ayinxalenye nje yengxoxo. Kububudenge ukungahoyi imbonakalo enkulu ethathwe nguHess ngo-Eva. Eli bali alizisi nje kuphela iinyani ezaziwayo zokuBulawa Kwabantu Ngenkohlakalo, ikwalatha nakwabo bakwenza oko ngokushiywa. Isimo esithandanayo "sokujonga enye indlela", ngokungathi ubundlobongela abenzeki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Inoveli » Indlu yaseJamani
UHarrison Ford. Iindima ezi-8 zoncwadi lomdlali osele edume